E-News Nepali || Fast and Accuracy » रहेनन् चिनियाँ हिरो डाक्टर, जसले भाइ रस पत्ता लगाएर विश्वलाई बताए
रहेनन् चिनियाँ हिरो डाक्टर, जसले भाइ रस पत्ता लगाएर विश्वलाई बताए
काठमाडौं । चीनमा फैलिएको कोरोना भाइ रसबारे सबैभन्दा पहिला थाहा पाउने एक चिनियाँ चिकित्सकको बिहिबार मृ त्यु भएको छ। कोरोना भाइ रसबाट संक्र मित लि वेनलियाङकोे बिहिबार वुहानमा मृ त्यु भएको चिनियाँ अधिकारीहरुले जनाएका छन्। को थिए उनी ? जनवरी महिनाको शुरुवातमा वुहानका अधिकारीहरुले नयाँ कोरोना भाइ रस फैलिएको बारे सुरुमा समाचार लुकाउन खोजेका थिए।
यी डाक्टरले नयाँ कोरोना भाइ रसबारे जानकारी दिनखोजे पनि प्रहरीले उनलाई घरमै पुगेर अफवाह ब न्द गर्न चेता वनी दिएको थियो। शुरुवातमा ‘हल्लाबाज’ को संज्ञा पाएका ती डाक्टरलाई त्यसको एक महिनापछि भने नायकको संज्ञा पाए। चिनियाँ अधिकारीको चेता वनी बाबजुद वुहानको केन्द्रीय अस्पतालको शय्याबाट डाक्टर लि वेनलियाङले विश्वलाई नयाँ कोरोना भाइ रसबारे सामाजिक सन्जालमा जानकारी दिएका थिए।
उनको जानकारी पछि यसबारे विश्वभर सचेतना फैलिएको हो। डाक्टर लिका अनुसार उनले डिसेम्बर महिनामै नयाँ कोरोना भाइ रस फैलिएको चाल पाएका थिए। उनी ७ वटा रोगीको उपचारमा खटेका थिए। जहाँ उनले सन् २००३ को सार्स रोगजस्तै यस भाइ रस भएको पत्ता लगाएका थिए। सार्स भाइ रस सन् २००२ नोभेम्बर देखि २००३ को जुलाईमा चीनमै देखिएको थियो। सार्स १७ देशमा फैलँदा ७७४ को मृ त्यु हुनुको साथै ८ हजार ९८ जनामा यसको संक्र मण देखिएको थियो। तर जब डाक्टर लिले नयाँ भाइ रसबारे चेता वनी दिन थाले।
उनलाई पब्लिक सेक्युरिटी ब्युरोबाट हल्ला र त्रास फैलाएको र सामाजिक व्यवस्थामा खलल पुर्याएको आरोप लाग्यो। डिसेम्बर ३० मा लिले आफ्ना सहपाठीहरुलाई नयाँ भाइ रस देखिएको र त्यसबाट बच्न मास्क तथा भाइ रस प्रतिरोधी पोशाक लगाउन चेतावदी दिएका थिए। ब्युरोले चेता वनीपूर्ण भाषामा लिलाई भनेको थियो,‘हामी गम्भीर रुपमा तपाइँलाई चेता वनी दिन्छौं, तपाइँ आफ्नो जिद्दी छाड्नुहोस्, हल्ला बन्द गर्नुहोस्।’ लिले गरेको हल्लाले समाज त्रसित र भयभित मात्र हुने बताइएको थियो। लिमाथि अफवाह फैल्याएकोमा प्रहरीले अनुसन्धान समेत गरेको थियो।
त्यसपछि जनवरीमा डाक्टर लिले चिनियाँ वेबसाइट विबोमा आफ्ना भनाइहरु प्रकाशित गरे। उनले आफूले थाहा पाएको भाइ रसबारे सबै प्रस्टसँग राखे। जनवरीको पहिलो हप्ता वुहानमा डाक्टरहरुले कोरोनाबाट पीडितको उपचार सामान्य रुपमै गरिरहेका थिए। प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेपछि लिले एक महिलाको उपचार गर्नुपर्ने थियो। उनलाई थाहा थिएन कि उनमा नयाँ नोबल कोरोनाको संक्र मण छ। त्यसपछि लिपनि कोरोनाबाट संक्र मित बने। उनले अस्पतालको शय्याबाटै आफूलाई के भइरकेको छ जानकारी दिन थालेपछि कोरोनाबारे विश्वमा सचेतना फैलिएको छ।
जनवरी १० मा डाक्टर लिले आफूलाई कफ भएको विबोमा बताए। त्यसको दुई दिनपछि उनी अस्पतालमा भर्ना भए। उनको परिवार नै बिरामी प र्यो। डाक्टर लिमा नयाँ कोरोना संक्र मण भएको दश दिनपछि अर्थात् जनवरी २० मा चीनले कोरोना भाइ रसलाई खतराको संज्ञा दियो। चीनमा स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरियो। हाल विश्वभर प्रशंसा कमाइरहेका डाक्टर लिको बिहिबार नि धन भएको हो। -बीबीसी
प्रकाशित मिति २३ माघ २०७६, बिहीबार १६:३२
श्रीमानको कुटाइबाट दाँत भाचिएकि भाइरल संगीता राना मगरको रेकर्ड भयो पहिलो गीत, खेम सेन्चुरीलाई भेट्ने भने पछि रोइन् खुशीले
हार्दिक श्रद्धा’ञ्जली, साच्चिकै उदाहरणिय बन्यो राज र भिमाको प्रेम !
चाहे पार्टी फुटोस या गठबन्धन एमसीसी कुनै हालतमा पारित हुन दिदैनौँ : भन्नू हुन्छ भीम रावल !
यी हुन् प्रहरीका छोरीहरु, जस्ले बुवालाई बचाउँन आमाको मृ’त्यु सुनाएनन्